Kuyagqugquzela Okomafikizolo Kowamabhayisikili Abakhubazekile — Cycling South Africa
Kuyagqugquzela Okomafikizolo Kowamabhayisikili Abakhubazekile
September 07, 2015 / Mylene Paynter
Simon Makgobela. Photo supplied
Ukuba yingxenye yendebe yomhlaba kuvumela abadlali ukuba baqhudelane nompetha bompetha kubangwa izindondo kanye namaphuzu. Kodwa-ke, ukuthola ithuba lokuba ingxenye yomzukiswano wesine wendebe yomhlaba wamabhayisikili alabo abakhubazekileyo i-UCI Para-cycling Road World Cup ekhaya eMgungundlovu kunika abadlali balomdlalo baseMzansi Afrika ithuba lokuqophisana nompetha bakwamanye amazwe.
Abaziwa njengomafikizolo kumdlalo wamabhayisikili wabakhubazekile futhi lapho kushovwa khona ngezandla oSimon Makgobela noPalesa Manalengbangabadlali bamabhayisikili abakhubazekile abalinde ngabomvu ithuba lokuzizwa amandla ngalempelasonto emijahweni ezoqala ngomhlaka 11 kuya ku 13 Septhemba ekomkhulu laKwaZulu-Natal eMgungundlovu.
Impilo kaMakgobela yashintsha ngonyaka ka-2002 ngesikhathi ayesengcupheni yokungenela umncintiswano wokudansa okhokhelayo lapho azithola esengozini eyamunqamula yomibili imilenze yakhe. Lensizwa ewumsinsi wokuzimilela eMunsieville okuyindawo eseKrugersdorp eGauteng ibonga kwakhona ukuba isawadla anhlamvana kunokuba ikhalele imilenze yayo.
Ezama ukwehla esitimeleni esasiya eKrugersdorp esasesizosuka, ibhantshi ayeligqokile labanjwa iminyango yesitimela isivaleka kanti futhi sesisuka isitimela. Wathi ezama ukuzikhulula, samudonsa isitimela kanti ngaleso sikhathi nesivinini sasibe sikhula. Wakheqeka wabe esesakazeka phansi ngaphandle kwesitimela ngaphambi kokuba simudonsele ngaphansi okuyilapho anqamuka khona yomibili imilenze yakhe.
“Ngaleso sikhathi, ngalahlekelwa ikho konke enganginakho okwaphoqa ukuba ngiqale ekuqaleni. Isimo saphoqa ukuba ngisebenzise isihlalo samasondo ukuze ngikwazi ukunyakaza kanti futhi ngangibuye ngingenele imijaho ngaso futhi,” kusho uMakgobela.
Lomlisa oneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye [29 years] waqala ukugibela amabhayisikili ashovwa ngezandla ngonyaka ka2012 ngesikhathi omunye umdlali wawo okhubazekile naye futhi osemele lelizwe kulomdlalo uHilary Lewis emufundisa ngawo. ULewis wamuchazela ukuba lamabhayisikili asebenza kanjani njengoba eshovwa ngezandla kanti uMakgobela waheheka kakhulu ngesikhathi omunye umlisa obizwa ngo-Andries Scheepers emuboleka loluhlobo lwebhayisikili.
“Ngangenela umuqhudelwano waloluhlobo lwamabhayisikili owawuseGoli kanti ngizomane ngiwuthande lomdlalo,” kusho uMakgobela. “Esikhundleni sokuba ngijikeleze kathathu nje kuphela, ngangilokhu ngiphindaphindile ngoba kwakungeve kumnandi. Ngangizama ngawo wonke amandla ukuba ngibe sezithendeni zika-Andries kanti futhi ngilokhu ngizama ukunyusa isivinini engigijima ngaso.”
Ekuqaleni kwalonyaka, uMakgobela wakwazi ukungenela umuzukiswano wokuqala nowesibili emncintiswaneni we-UCI Para-cycling Road World Cup owawubanjelwe e-Italy naseSwitzerland kanti eze ekwazi ukuhambela lamazwe aphesheya, wayesizwe uMnyango weZemidlalo wakuleli. Imizamo yokuba akhule njengomdlali walomdlalo wezamabhayisikili ashovwa ngezandla ilekelelwa abagqugquzeli bezamabhayisikili eMzansi Afrika i-Cycling South Africa.
“Ngiyilindele indebe yomhlaba eMgungundlovu yize ngingazilungiselele njengezinye izimbangi esobe sigijima nazo. Kuyongithatha isikhashana ukuba ngifike kulelizinga abakulo kodwa ngizozama konke okusemandleni ami ukuze ngenze kahle,” kusho uMakgobela.
“Igalelo loMnyango weZemidlalo wakulelizwe selikhipha izithelo futhi lenza okuningi ekuthuthukiseni lomdlalo wamabhayisikili owabakhubazekileyo nasekumsizeni ukuba angenele imincintiswano ngoba ave enesiphiwo kulomdlalo,” kusho uMqondisi weKhomishani yezabamabhayisikili kulelizwe uDr. Mike Burns weCycling SA Para-cycling Commission.
“Inhlonipho nokwamukwelwa anikwa khona ngabadlali balomdlalo abaqhamuka emazweni ahlukeneyo ngesikhathi ese-Italy naseSwitzerland kwangijabulisa kakhulu. UMakgobela uzobuyela esikoleni sezemidlalo i-Stellenbosch Academy of Sport eyoqedela uhlelo lokuqeqesha olenzelwe yena ukuze anyuse izinga aqhudelana kulo.”
Umyalezo kaMakgobela kulabo abazithola besesimweni esithi asifane nesakhe uqondile: “Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kumele ungalilahli ithemba ngoba uNkulunkulu unawe ngaso sonke isikhathi futhi usuke usangumuntu wakhe. Akukho okungakuhlula uma ubeka umqondo wakho kukho.”
Umuntu osamusha kakhulu kulomdlalo uManaleng yena impilo yakhe eyashintsha ngesikhathi amabhuleki ebhayisikili lakhe engasebenzanga okwenza ukuba aphaphalaze ehamba ngesivinini esiphezulu. Emuva kokushayisa asakazeke, wabhoboka iphaphu, wahleshukelwa izimbambo ezimbili, washayeka nasekhanda kodwa kwaba ukugudluka komugogodla wakhe okwamulimaza kakhulu. Umanaleng yena usebenzisa izingalo ukuze ahambe.
“Ingozi yami yenzeka esikhathini esingangonyaka osuwedlule. Ngangiwuthanda umdlalo wezamabhayisikili futhi ngithanda ukuzizwa ukuthi nginomoya ongakanani. Awukho umdlalo engingazange ngiwudlale njengebhola, ukuqubula izinsimbi kanye ne-hockey kanti konke ngangikuthanda,” kusho uManaleng owayengasabi ukuzama nanoma yiluphi uhlobo lwezemidlalo.
Kuyamujabulisa futhi ujahile ukuba yingxenye yomdlalo womhlaba wezamabhayisikile ngalempelasonto ezayo. “Kuyathusa kodwa kuyajabulisa futhi. Ngiyawuthanda umuzwa engiwutholayo ngokuba ebhayisikilini kanti kungenza ngizizwe sengathi inkululeko yami yonke ikumina nanokuthi ayikho into engangivimba,” kusho lentokazi.
“Kwathi langa limbe ngihleli ngisalulama, ngangibukela umjaho wezamabhayisikili owaziwa ngele-947 Cycle Challenge kumabonakude. Ngangifuna ukudlala amabhayisikili kanti udokotela owayengisiza ngokululama emuva kwengozi wangikhombisa izithombe zomgibeli wodumo kulomdlalo uPieter du Preez kanti ngazi ngalesosikhathi ukuba yilokhu engifuna ukukwenza. Ngamubangela isicefe ngimuhlupha kodwa wangisiza kakhulu futhi wangiweza kokuningi,” esho ehleka. “Futhi ngashayela uHilary, owangimema ukuba ngizame ibhayisikili elishovwa ngezandla futhi wangisiza nangokuningi okunye futhi.”
Inkampani yodumo iPrimedia iyamusiza lomdlali oneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili ngokuthi imulande ekhaya kubo ukuze aye lapho angakwazi ukuyogibela khona ibhayisikili lakhe elishovwa ngezandla kanye ngesonto kwiSifundazwe saseGauteng.
Ngesikhathi ebuzwa ukuba yini emgqugquzelayo, uManaleng uthe: Ukuthi ngiyaphiya kuyangigqugquzela kanti futhi nokwenza lokho engikuthandayo.”
Umncintiswano we-2015 UCI Para-cycling Road World Cup izodlalelwa ezindaweni ezimbili. Umqhudelwano obekelwe isikhathi sokuqeda uzoba eMidmar Dam Complex ngoLwesihlanu mhlaka-11 Septhemba kanti umqhudelwano womgwaqo uzobe use-Alexandra Park ngoMgqibelo nangeSonto mhlaka-12-13 Septhemba eMgungundlovu.
Ulazwi ngalomncintiswano luyatholakala ku: http://www.cyclingsa.com/2015-uci-para-road-world-cup/
September 07, 2015 / Mylene Paynter/ Comment
UCI Para-cycling Road World Cup: ...
‘Dead Man Cycling’ headed to South ...